Caalamka, 08 June 2019
Sabti 8 June 2019
Ayatollah Ali Khamenei oo ka digay 'heshiiska qarniga'
Hoggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta dhalleeceeyey qorshaha Mareykanka ee nabadda Bariga Dhexe, oo uu ku sheegay “khiyaano weyn oo lagu sameynayo dunida Islaamka”, wuxuuna dalalka Khaliijka kaga digay inay taageeraan.
Sacuudiga iyo Imaaraadka oo cambaareeyey go'aanka Qatar
Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhalleeceysay Qatar diidmadeeda natiijadii kasoo baxday wada-hadalladii ku saabsanaa xiisadda gobolka iyo Iran ee dhowaan ka dhacay magaalada Makkah, halka Imaaraadka ay ku eedeeyeen Doha inay dib uga guratay natiijada shirka.
Madaxweyne Donald Trump oo Tagay Magaalada London
Trump ayaa la kulmi doona boqorada dalka Britain, iyadoo ay wehliyaan xaaskiisa Melania Trump iyo qaar ka mida caruurtiisa.
Rabshado ka Dhacay Masjid Al-Aqsa
Rabshado ayaa maanta ka dhacay gudaha masaajidka barakeysan ee Al Aqsa ee magaalada Qudus, kaddib marki ay ciidamada booliska Israil gudaha u galeen, xilli ay halkaasi ku cibaadeysanayeen boqolaal Muslimiin Falastiiniyiin ah.
Iran "Sacuudiga waxay u faa'iidaynayaan Yahuudda"
Iran ayaa ku eedeysay Sacuudiga inay kala qeybsanaan ka abuurayaan gobolka si ay ugu faa’iideeyaan Israel, kadib markii boqortooyada ay marti-gelisay kulan madaxeed ay leeyihiin hogaamiyayaasha Carabta iyo Khaliijka, oo lagu raadinayo taageero ka dhan ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah.
Ciidamada Israel oo toogtay dhallinyaro Falastiiniyiin ah
Qof Falastiini ah ayaa toorey geliyey kuna dhawaacay laba qof oo Israeli ah bariga magaalada Jerusalem ka hor inta aan isaga toogasho lagu dilin, sida ay shegeeen booliska Israel.
Sacuudiga oo xulufo u raadsanaya Iran
Boqortooyada Sacuudiga ayaa taageero ka raadin doonto saddex shir madaxeed oo Khamiista maanta ah magaalada barakeysan ee Maka uga billaaban doona hogaamiyaasha Carabta iyo dhamaan madaxda dalalka Islaamka, kuwaasoo uu Sacuudiga xoogga kusaari doono wax uu ku tilmaamay halis uga soo socoto Iran.
Baarlamanka Israel oo is-kala diray kuna baaqay doorasho
Baarlamanka Israel ayaa maanta u codeeyey inuu iskala diro islamarkaana la qabto doorasho labaad oo deg deg ah, kadib markii ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku guul-dareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysi ah.
Bolton oo Iran ku eedeeyey weerarkii maraakiibta
Dad lagu dilay weerar ka dhacay Japan
Gabar iskuul dhiganaysay iyo nin ayaa lagu dilay intii uu socday weerar uu nin mindi wata ka fuliyey meel u dhow magaalada Tokyo ee dalka Japan, kaasi oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 16 qof oo kale.
Doorka Soomaalida ee doorshada Midowga Yurub